“Faafinta Diinta Islaamka waxa lagu helayaa ducada Ilaahay iyo dhamaan makhluuqaadkiisa iyo oofinta ballankii Alle, hadii kale…” – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir ayaa cadeeyey in qof kastoo diinta islaamka faafiya helayo ducada Ilaahay iyo dhamaan makhluuqaadkiisa, kuna baraarujiyey bulshada Islaamka inay qaataan kaalintooda sidii ay u faafin lahaayeen Diinta Islaamka.
Khudbad manta (shalay) Sheekh Maxamed kaga hadlayey muhiimada faafinta diinta Islaamka ayuu ku bilaabay, dhamaanteen waxa inna sugaya waajib ah innaynu ka qeybqaadano faafinta Diinta islaamka, isagoo ka hadlayana waxuu yidhi, “Dhamaanteen waxa inna wada sugaya kaalin loo baahan yahay inaynu buuxino, oo ah sidii dadka iyo bulshada loo gaadhsiin lahaa Diinta Islaamka, oo dadku ka wada qeybqaato, laakiin, sida wakhtigan taagan aan lagu hallayn keliya Culimadda, laakiin waajibkaasi yahay mid ummada oo dhan wada saaran, qof waliba intuu karayo ka qabto.
Faafinta diinta islaamka iyo waanada wanaagsan oo laga yaabo inuu qofka samaynaya culays iyo dhibaato kala kulmo, waxay ka mid tahay qeybaha jihaadka ayuu sheegay Sheekh Maxamed, isagoo yidhi, “Faa’iidooyinka faafinta Diinta Islaamka iyo waanada wanaagsan oo laga yaabo in qofku kala kulmo culays iyo dhibaato waxay ka mid tahay qeybaha jihaadka, oo mar dadka xunxun waxa lagaga hortagayaa qoriga, iyo ficilka, marka hadalka. Sida Ilaahay markuu ummada la hadlayey aayad macnaheeda ku sheegay, ‘Maaha ummada dhamaantood inay jihaadka u wada baxaan, waa in la helaan dadka qaar u diga, diinta gaadhsiiya, oo dareenkooda nooleeya,’ taasoo caddeyn u ah in faafinta diinta islaamku qeybaha jihaadka ka mid tahay.
Dadka inaad diinta islaamka gaadhsiiso ayaa ka khayr badan duunyada iyo dadka aynu sida weyn u baadigoobno ayuu sheegay Sheekh Maxamed, isagoo ka hadlayana waxuu yidhi, “Innaynu Diinta Islaamka Faafino ayaa inooga kheyr badan ubadka iyo aduunyada aynu sida weyn u baadigoobno ee Ilaahay iyo aakhiro inna seejinaya, sida culimmo badan oo Sheekh Nawawi ka mid ahaa ugaga mashquuleen ubad iyo ooriyo, gaadhsiinta diinta islaamka ee ummada. Siduu nebigu CSW xadiis macnahiisa inoogu sheegay, ‘Qof keliya oo halowsanaa inuu sababtaada hanuunka Ilaahay u qaato, gaadhsiintaada, ayaa kaaga wanaagsan geela cascas,”